Thunderbird 78 yakatoburitswa, ziva nhau dzayo uye shanduko | Linux Vakapindwa muropa
Thunderbird 78 yakatoburitswa, ziva nhau dzayo uye shanduko
Mushure memwedzi gumi kubva pane yazvino vhezheni yekuburitswa Iyo nyowani vhezheni yeakakurumbira email mutengi «Thunderbird 78» inosvika iyo inogadzirwa nenharaunda uye yakavakirwa paMozilla matekinoroji.
Iyi vhezheni itsva yakaburitswa inorondedzerwa sevhezheni yeLTS .
1 Nhau huru muThunderbird 78
2 Tora Thunderbird 78
Nhau huru muThunderbird 78
Mune iyi vhezheni itsva yeThunderbird 78 se inosimbisa yakavakirwa-mukati yekuyedza rutsigiro rwekupedzisira-kumagumo kunyorerakana tsamba nemasaini edhijitari etsamba zvichibva pane OpenPGP yeruzhinji makiyi.
Aya mashandiro akambopihwa neiyo Enigmail plugin, iyo isisiri kutsigirwa neThunderbird 78.
Iyo yekubatanidza kuitisa chiitiko chitsva, icho chakagadzirirwa pamwe nekutora chikamu kwemunyori Enigmail. Izvo zvakakosha kuti utaure kuti rutsigiro urwu harugoneswe nekutadza.
MuThunderbird 78 tinogona kuzviona chimiro chikuru chinosanganisa iyo Mheni karenda kuronga uye maneja webasa, pamusoro peiyo rutsigiro rwekununura muICS fomati kune khalendari nekutsanangudza "-file" sarudzo pamutsetse wekuraira.
Uyewo akawedzera kugona kusarudza mameseji kuburikidza nemabhokisi ekutarisa mune yakasarudzika ikholamu «Sarudza mameseji» pachinzvimbo chechinyakare mucherechedzo uye bhatani «Delete» yakawedzerwawo kune iyo pani ine runyorwa rwemeseji yekudzima iwo akaratidzirwa mameseji.
Urongwa hwewindo rezvirongwa zveakaunzi hwakagadzirwazve kuitira kuti zvive nyore kunzwisisa uye kuwana iyo yaunoda gadziriso. Iyo "Akaundi Zvirongwa Center" yakagadziridzwa muchimiro chetab.
Tsigiro yeWCAP (Web Calendar Access Protocol) yabviswa uye shanduko yekushandisa asynchronous kuchengetedza kuwana yakwana.
Mukuwedzera isu tinogona zvakare kuwana modhi ine rima theme, yakashandurwa kudzikisa mutoro wekuona kana uchishanda murima. Iyo tema tema inoitwa otomatiki kana iwe uchigadzira iyo husiku mamiriro mune anoshanda system.
Uye izvo new vector maitiro akaiswa kune zvigunwe, , que inopa mufananidzo uri nani pane HiDPI kuratidza uye kana mamiriro erima akagoneswa.
Yeimwe shanduko zvinoratidzika kunze kweshanduro iyi:
Chitarisiko chemaneja plugin chakachinjwa. Iye zvino unogona kufanoona madingindira.
Sarudzo yakawedzerwa kumasethingi kubvumidza kusazivikanwa kwemusoro pamusoro penguva yeshoko.
Chinhu chakawedzerwa kumenu yekushandisa kufonera kutsvaga kwepasirese pane rese meseji base. Yepasi rese yekutsvaga tebhu yakagadzirwazve.
Tsigiro yeOTR meseji yekunyorera (isina kunyoreswa mameseji) uye rutsigiro rwe IRC echo mameseji akawedzerwa kutaura.
Zvinodikanwa zvepuratifomu yeLinux zvakawedzerwa: iwe ikozvino unoda kanenge GTK 3.14, Glibc 2.17 uye libstdc ++ 4.8.1 kushanda.
Mabhatani akawedzerwa kumenu yemamiriro efaira pamwe nerondedzero yemameseji achangobva kuvhurwa ekufambisa zvinhu kumusoro uye pasi mune iyo runyorwa.
Iyo kero bar yematebhu anoratidza mapeji ewebhu yakagadziridzwa.
Usati waratidza mapassword akachengetedzwa, password yemushandisi inokurudzirwa.
Raibhurari yeSQLite inoshandiswa kuchengeta bhuku rekero. Shanduko kubva kune yekare MAB (Mork) fomati inoitwa otomatiki.
Wakawedzera nyowani nyowani uye fomati chinhu chevCard.
Wakawedzera rutsigiro rwevCard shanduko shanduro 3.0 uye 4.0.
Yakagadziridzwa dialog yekurongedza tsamba mafolda (kuchenesa meseji dzadzimwa).
Hardware yakakwidziridzwa giraidhi rutsigiro inogoneswa nekutadza.
Yakaremara rutsigiro rweTLS 1.0 uye 1.1.
Kurega kutsigirwa kwema XUL plugins.
Tora Thunderbird 78
Kune avo vanofarira kuisa iyi vhezheni vhezheni, vanofanirwa kuziva izvozvo inowanikwa chete mukutora kwakananga uye otomatiki kusimudzira kubva kushanduro isati yasvika vhezheni 78.0 haina kupihwa uye ichagadzirwa chete mushanduro 78.2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Thunderbird 78 yakatoburitswa, ziva nhau dzayo uye shanduko
Ini ndinotova nazvo ... Asi izvo zvido zvacho zvine hutsinye zvichienzaniswa neshanduro yapfuura (yakawanda RAM yaidikanwa, iyo yanga isati yakanyanya kumberi).
Zvisinei, iyo Thunderbird, iri muWin (ini handina kuyedza izvozvi, asi ndichazviita chero nguva) uye muLinux, inoshandisa yakawanda RAM. Pasina kuvhiringidzika uye, pasina kuita zvakawanda, hafu yegigi yatoshandisa kare.
Ikozvino chaicho chiri "zviwanikwa mutengesi."
GitHub's arctic vault yatove inochengetedza yakavhurwa sosi mune piqlFilm rolls
SUSE yakatanga nekutora kweKubernetes Rancher Labs